SANJAY GURUNG: जीतु नेपाल को बुढीको नजरमा मुन्द्रे
हँसाउनका लागि उहाँलाई कुनै घटना या अवसर चाहिँदैन　।
म अलिक मोटी छु　। उहाँभन्दा धेरै खाना खान्छु　। उहाँ मलाई 'यसैगरी मोटाइरह्यौ भने मेरो सिरियल (जिरेखुर्सानी)मा हात्तीको रोल तिमीलाई दिन्छु' भन्दा मलाई असाध्यै हाँस उठ्छ　।
म बढी मेकअप गर्छु　। बेलुका कहीँ पार्टीमा जानुपरेमा उहाँ मलाई बिहान खाना खानेबित्तिकै 'अब मेकअप गर्न जाऊ' भन्नुहुन्छ　। मलाई तयार हुने धेरै समय दिनुभएको रे !
उहाँ तरकारीलाई पनि हँसाउने विषय बनाउनुहुन्छ　। जस्तो, मैले बिहान केराउ र प्याजको तरकारी पकाएँ भने उहाँ 'बेलुका अब बेग्लै तरकारी खानुपर्छ,' भन्नुहुन्छ　। के बेग्लै भनेर सोध्यो भने 'नानु, भरे बेलुका प्याज र केराउको तरकारी खानुपर्छ है !' भन्नुहुन्छ　।
उहाँले मलाई हँसाउनुभएका घटना सम्झिसाध्य छैनन्　। मैले सम्झिरहने यौटाचाहिँ यस्तो छ　।
हामी एकपटक एउटा अफिसमा पुगेका थियौँ　। त्यहाँको पन्ट डेस्क अग्लो थियो　। भित्रबाट उहाँको टाउको मात्रै देखियो　। उहाँले 'म होचो होइन, तपाईंको टेबुल अग्लो हो' भनेर त्यहाँकी रिसेप्सनिस्टलाई हँसाइदिनुभयो　। साथमा, मलाई पनि ! अनि, बिहेअगाडिको जितुजीको प्रेमप्रसंगबारे लेखिएका अखबार पढ्दा र उहाँलाई प्राप्त भएका दुईवटा गि्रटिङ कार्ड हेर्दा म जहिले पनि मज्जाले हाँस्छु　।
जितुजी हँसाउने स्वभावको हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब उहाँ कहिल्यै रुनुहुन्न भन्ने होइन　। उहाँलाई मैले धेरैपटक रोएको देखेकी छु　। आफ्ना बुबा बित्नुहुँदा उहाँ धेरै रुनुभएको थियो　। बुबाको निधन भएको ६ महिनापछि दिल्लीमा उहाँको दाजुको निधन भयो　। काठमाडौं आएपछि उहाँ मसित भक्कानिएर रुनुभयो　। त्यस्तै, विगतका संघर्षका कुरा सुनाउँदा पनि उहाँ आँसु झार्नुहुन्छ　। उहाँ रुनुभएको अर्काे एउटा घटना म सम्झिरहन्छु　। आफ्नै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने सिलसिलामा छतबाट हामफाल्दा उहाँको खुट्टा भाँचिएको थियो　। त्यसको लगत्तै इजरायलमा कार्यक्रम गर्न जानुपर्‍यो　। त्यतिवेला 'यस्तो वेलामा पनि आराम गर्न पाइनँ, कस्तो पेसामा लागिएछ' भनेर रुनुभयो　।
पहिरनमा कटन चेक सर्ट, कटराइज पाइन्ट, सिम्पल जुत्ता, कालो टाई र कालो लेदर ज्याकेट मन पर्छ, उहाँलाई　। त्यस्तै, उहाँलाई मन पर्ने पाँच ठाउँमा हङकङ, दुबई, पोखरा, चितवनको सौराहा र लुम्बिनी हो　।
जितुजी एकदमै कन्जुस हुनुहुन्छ　। मजस्तो खुलेर खर्च गर्नुहुन्न　। सधै पैसा बचाउन खोज्नुहुन्छ　। उहाँको यो बानी मलाई मन पर्दैन　। घरमा खाना नमीठो या ढिलो भयो भने कड्किएर बोल्ने गर्नुहुन्छ　। उहाँको यो बानी पनि मलाई मन पर्दैन　।
मुड अफ भएका वेला हामी दुईजना बाहिर हिँड्दा कसैले मुन्द्रे भनेर बोलायो भने मलाई असाध्यै रिस उठ्छ　। अनि, सुटिङबाट जितुजी ढिलो आएका वेला गेट खोल्नुपर्दा मलाई असाध्यै रिस उठ्छ　। १०-५ को जागिर खाने श्रीमान् भएको भए सँगै बसेर खाना खान पाइन्थ्यो, घुम्न जान पाइन्थ्यो भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ　।
सिरियलका कमेन्टले उहाँलाई एकदम खुसी बनाउँछन्　। सफल भएजस्तो लाग्छ रे उहाँलाई　। उहाँलाई मन पर्ने कलाकार मह जोडी र 'मुखाँ हान्नुजस्तो दाजु' शिवहरि पौडेल हुन्　।
मेरा नजरमा जितुका पाँच गुण
-समयको ख्याल गर्नुहुन्छ
-स-साना कुरामा खुसी हुनुहुन्छ
-सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुन्छ
-मासु मीठो पकाउनुहुन्छ
उहाँमा धैर्य छैन
छिट्टो अरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ
रिसाएका वेला प्याच्च बोल्नुहुन्छ
अरूका कमजोरीमाथि छिट्टो कम्प्लेन गर्नुहुन्छ